३६० सिटको विमानमा एक्लै यात्रा गर्ने यात्रु को हुन् ? कस्तो रह्यो उनको यो यात्राको अनुभव ? – Dailny NpNews
३६० सिटको विमानमा एक्लै यात्रा गर्ने यात्रु को हुन् ? कस्तो रह्यो उनको यो यात्राको अनुभव ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १४, २०७८ समय: १२:०७:२८
काठमाडौं। इमिरेट्स एयरलाइन्सको एक विशाल बोइङ ७७७ विमानमा एकजना मात्रै यात्रुले यात्रा गरेको विषय अहिले चर्चामा छ। विमानमा एक्लै यात्रा गर्ने यात्रु अहिले सबैको चासोको विषय बनेका छन्। ती यात्रु को हुन् ? किन उनी मात्रै एक्लैले विमानमा यात्रुको रुपमा यात्रा गर्न पाए । एक्लै यात्रा गर्दा उनको अनुभव कस्तो रह्यो ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु धेरै जनाको मनमा छन् ।
बीबीसीका अनुसार ती यात्रु भावेश जवेरी हुन् । उनले १९ मे २०२१ का दिन बिहान मुम्बइ बाट दुबईको यात्रा गरेका थिए । दुबइमा बस्ने भावेश आफ्नो व्यवसायको सिल सिलामा मे महिनाको पहिलो हप्ता मुम्बइ आएका थिए । काम सकेर दुबइ फर्किनको लागि उनले १० दिन पहिले टिकट बुकिङ गरेका थिए । पहिले उनी धेरै जसो बिजनेस क्लासमा यात्रा गर्थे तर महा मारीका कारण उनलाई जहाजमा भीड हुँदैन होला जस्तो लाग्यो र उनले इकोनोमी क्लासको टिकट बुक गरे । १८ हजार रुपैयाँमा उनको टिकट बुक भयो ।
१९ मेका दिन बिहान साढे ४ बजेको उडान थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमान यात्रा नियम अनुसार उनी आधा रातमा विमानस्थल पुगे । चेक इन गर्ने समयमा थाहा भयो उनी विमानमा यात्रा गर्ने एक्ला यात्रु हुन् । केही बेर उनी आफैंलाई आफू एक्लो यात्रु भएको विश्वास भएन । केही समयपछि उनलाई पक्का भयो यो सपना होइन वास्तविकता हो । उनी विगत २० वर्षदेखि दुबइमा बस्दै आएका छन् ।
यस बीचमा उनले कैयौं पटक मुम्बइ र दुबइको यात्रा गरे । तर, यो ‘सुखद संयोग’ उनको जीवनमा पहिलो पटक भएको थियो। दुबइबाट बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘म आम रुपमा भिडियो बनाउँदिन । क्यामेरामा देखिन पनि हिच्किचाउँछु । तर यो यात्रा लाई मैले आफैं आफ्नो मोवाइलमा खिचें । म सधैंको लागि यो यादलाई साथमा राख्न चाहन्थें । चेक इनपछि एयरपोर्टको गेटदेखि फ्लाइटसम्म मलाई त्यसैगरी अटेन्ड गरियो जसरी अरु दिन यात्रा गर्दा गरिन्थ्यो ।
इमिरेट्स फ्लाइटका स्टाफको लागि पनि यो पूरै अलग अवसर थियो । विमानमा पस्नासाथ क्रु सदस्यले ताली बजाएर स्वागत गरे । पाइलट कक पिटबाट निस्केर स्वयं भेट्न आए । मजाकमा उनले पूरा विमान घुम्न पनि अफर गरे ।’ इमिरेट्सको फ्लाइट इके ५०१ जसमा भावेशले मुम्बइदेखि दुबइसम्मको यात्रा गरे । त्यो ३६० सिट भएको बोइङ ७७७ विमान थियो । उड्डयन विशेषज्ञ राजेश हांडाका अनुसार मुम्बइदेखि दुबइको उडान अढाइ घण्टाको छ ।
यसमा लगभग २५ टन इन्धन खर्च हुन्छ । एयरलाइन्सले केवल इन्धनका लागि मात्रै १२ देखि १८ लाख खर्च गरेको हुनुपर्छ । यदि पूरै यात्राको खर्च निकाल्ने हो भने २० देखि २५ लाखसम्म हुन सक्छ ।तर, एक जना यात्रुको लागि एयरलाइन्सले यति धेरै खर्च किन गर्छ ? यो प्रश्न भावेशको दिमागमा पनि आएको थियो र उनले स्वयं क्रु सदस्यसँग यसबारे सोधेका थिए । भावेशले भने ‘खासमा मलाई यो कुरा पहिले नै लागिरहेको थियो कि विमानमा धेरै भीड हुने छैन ।
को’रोना म’हामारीका कारण भारतबाट जानेहरुलाई युएइमा कैयौं प्रतिबन्ध लगाइएका छन्। अहिले केवल गोल्डेन भिसा भएका, युएइका नागरिक र कूटनीतिज्ञलाई मात्रै भारतबाट युएइ जाने अनुमति छ। केवल यी तीन वर्गका यात्री मात्रै व्यवसायिक उडानमा दुबइ जान सक्छन् । दुबइबाट मुम्बइ जाने यात्रुलाई मुम्बइ पुर्याएपछि यसै पनि यो विमान खाली फर्किन्थ्यो । मैले बुकिङ गराएर राखेको थिएँ त्यसैले मैले पनि यसमा दुबइ आउन अनुमति पाएँ ।’
भावेश पेशाले हीरा व्यापारी हुन् । उनी स्टारजेम्स ग्रुपका सीइओ हुन् । दुबइमा पत्नी र २ छोराछोरीसँग बस्छन् । ३६० सिटको जहाजमा एक्लै यात्रा गरेको उनको भिडियो दुबइ र मुम्बइको ह्वाट्सएप ग्रुपमा भाइरल भइरहेको छ । यो यात्रालाई उनी सुन्दर अनुभव मान्छन् । उनका अनुसार यस्ता अवसर जीवनमा कोही कोहीले मात्र जीवनमा एक पटक पाउँछन् । पैसाले यस्तो खुसी शायदै किन्न सकिन्थ्यो । उनले भने ‘मेरो फ्लाइट आधा रातको थियो त्यसैले मेरो निद्रा पूरा भएको थिएन । म पूरा यात्रामा सुत्न चाहन्नथें तर म निदाएँ । परिवारलाई मैले दुबइ पुगेपछि मात्रै मेरो साथमा के भयो भनेर बताएँ ।’